Guddoomiye iyo Ku-xigeenkiisi oo la dilay | Waabaryay.com
Home WARARKA Wararka Guddoomiye iyo Ku-xigeenkiisi oo la dilay
Guddoomiye iyo Ku-xigeenkiisi oo la dilay
Wararka inaga soo gaaraya Gobolka Shabeellaha Dhexe, ayaa sheegaya in Guddoomiyihii iyo Guddoomiye ku-xigeenkii Tuulada Cadayga ee hoostagta Deegaanka Qalimow ee Gobolka Shabeellaha Dhexe Xalay lagu dilay halkaasi.
Cabdulle Xasan Xaaji oo ah Guddoomiyihii Tuulada Cadayga iyo Cilmi Qooje Xasan oo ah Guddoomiye ku-xigeenkiisii, ayaa la sheegay in Xalay dabley hubeysan ay Tuulada ka wateen,isla markaana ay ku dileen Duleedka Deegaanka Qalimow ee katirsan Gobolka Shabeellaha Dhexe.
Qaar ka mid ah Dadka Deegaanka, ayaa sheegay in dilka Guddoomiyaha Tuulada Cadayga iyo ku-xigeenkiisi ay ka naxeen,isla markaana ilaa iyo hadda aysan ogeyn cida ka dambeysay dilkooda, iyo sababta loo dilay.
Ma jiro ilaa hadda wax war ah oo ka soo baxay Maamulka Degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe,kaas oo ay uga hadlayaan dilka loo geystay Guddoomiyihii Tuulada Cadayga iyo ku-xigeenkiisi.
Dhacdadaani ayaa waxa ay tahay mid ugub ku ah Gobolka Shabeellaha Dhexe,madaama mar qura la dilay labo Mas’uul oo Muhiim ahaa.
Previous articleRW Khayre oo Beesha Caalamka baaq Culus u diray
Next articleSoomaaliya & Qatar oo heshiis Cusub kala saxiixday